Izinkinga zesifo sikashukela > Isifo Sikashukela Sokunqoba!
Thayipha isifo sikashukela sohlobo 2
Kungani isifo sikashukela sibangela ukulahleka kwezinwele?
Izimbangela namakhambi ama-nsp ngokumelene nokulahleka kwezinwele, i-baldness Ukulahleka kwezinwele kuholela ku-alopecia - alopecia. I-alopecia ephelele isho ukulahleka kwazo zonke izinwele esikhunjeni sesikhumba. ...
Izimpawu zokuqala ze-hypoglycemia ezinganeni ezisanda kuzalwa
I-Hypoglycemia ezinganeni ezisanda kuzalwa: izimbangela, izimpawu, ukwelashwa, izibonakaliso.Kanti nokho ayikho incazelo ye-hypoglycemia esekelwe kwizifundo ezilandelwayo. ...
Ungayelapha kanjani i-edema yomlenze kwisifo sikashukela Ukuvuvukala kwemilenze yikhona ukugula okuvame kakhulu kushukela. Ngakho-ke, kulabo abahlaselwa yilesi sifo, kunconywa ukuba kwenziwe ukuhlolwa kwezitho nsuku zonke. ...
Ukwehla nokulahleka kombono kushukela: izimpawu zokuphazamiseka, ukwelashwa kanye nokululama
Ukulahleka kombono kwesifo sikashukela i-mellitus: ukwelashwa kwe-fundus I-Diabetesic retinopathy kungenye yezinkinga zesifo, okuholela ekulimaleni kwamehlo ku-mellitus yesifo sikashukela. ...
I-retinopathy yesifo sikashukela: izimpawu, izigaba, ukwelashwa
I-Diabetesic retinopathy I-Diabetesic retinopathy iyi-angiopathy ethile ethinta imithambo ye-retina futhi ikhula ibhekene nesizinda senkambo ende yesifo sikashukela. ...
I-cornea phakathi kwezinzwane (i-Interdigital)
Izindlela zokwelashwa nokuvimbela i-callus phakathi kwezinzwane Ukuthi umphumela ophumela phakathi kwezinzwane awubonakali kwabanye abantu, kepha kungaletha ukungakhululeki okuningi, ikakhulukazi uma umuntu engeke akwazi ukuyisusa isikhathi eside. ...
I-anginalopathy ye-retinal - izinhlobo, izimbangela, izimpawu, izindlela zokuxilongwa nokwelashwa
Isifo sikashukela i-retinal angiopathy I-retina, noma iqoqo lama-photosensitive receptors esikhwameni, kungenye yezicubu zomzimba womuntu ezicacisiwe. ...
Sibutsetelo yokugcoba okusebenzayo kanye okhilimu ukwelashwa unyawo sikashukela
Ungayikhetha kanjani i-oli yokupholisa engcono kakhulu yesifo sikashukela? Ukulimala esikhunjeni nge-hyperglycemia kuvame ukwenzeka, kuhambisana nokuqhekeka, izilonda ezibuhlungu, umuzwa wokuba wome nokuqina kwe-epermermis, ukulunywa nokubomvu. ...
Amafomu, Izimpawu, kanye ne-Treatment of Diabetesic Neuropathy
I-neuropathy yesifo sikashukela: izimbangela nezindlela zokwelashwa I-Diopic neuropathy yisilonda sohlelo lwezinzwa olubangelwa ukuphazamiseka kwe-metabolic ezigulini ezinesifo sikashukela i-mellitus. ...
I-Angiopathy yemikhawulo ephansi ku-mellitus yesifo sikashukela: izimpawu, ukwelashwa, ukuvimbela
I-angiopathy yesifo sikashukela emikhawulweni ephansi, izimpawu, ukwelashwa, ukuvimbela i-angiopathy yesifo sikashukela emaphethelweni aphansi, noma unyawo lwesifo sikashukela, kuyinkinga enkulu eyenzeka kubantu abanesifo sikashukela. ...
Isifo sikashukela kushukela: inkambo yesifo nokwelashwa
Isifo sikashukela nesifo sofuba: kungani zombili lezi zifo zikhula ngasikhathi sinye? Imbangela yokuqhamuka kanyekanye kwesifo sikashukela nesifo sofuba kungaba okulandelayo: Ukungabi namandla komzimba, okutheleleka ngaleli gciwane. ...
Umbono Wesazi: Ungawugcina Kanjani Umbono weziguli ezinesifo sikashukela
Umbono ngokuhlanganisa noma okususa u-0.5: Ngabe ngidinga izingilazi, ukuthi ngingathuthukisa kanjani? Ukwelashwa kwamalunga, abafundi bethu basebenzise ngempumelelo i-Eye-Plus. Ukubona ukuthandwa kwalo mkhiqizo, sinqume ukukunikeza ukunakwa kwakho. ...
Yini i-hepatomegaly yesibindi: izimpawu, ukudla
I-Hepatomegaly yesibindi: kuyini, izinkomba zezimpawu, ukuthi ungakuphatha kanjani Konke okuqukethwe kwe-iLive kuhlolwa ngochwepheshe bezokwelapha ukuqinisekisa ukunemba okuphezulu kakhulu nokuvumelana namaqiniso. ...
I-pancreatitis ngesikhathi sokukhulelwa - ingabe ikhona ingozi enganeni?
I-pancreatitis ekukhulelweni I-pancreatitis yisifo sokuvuvukala sanyumba. I-pancreatitis engalapheki ingaxuba kakhulu inkambo ye-trimester yokuqala yokukhulelwa, kepha cishe ayithinti ukukhula kwesibeletho ngemuva kwamasonto ayi-16. ...
Izimpawu nokwelashwa kwe-retinopathy kushukela
Izimpawu nokwelashwa kwe-retinopathy ku-mellitus yesifo sikashukela Ukwelashwa kwesifo esibi kangako njengesifo sikashukela kuyinto ephambili kwezokwelapha zesimanje. Imiphumela yesifo sikashukela sohlobo 2 ingaholela ekukhubazekeni noma ekufeni. ...
Isifo sikashukela mellitus nesifo senhliziyo: ukufuna isisombululo Umbhalo wencwadi yesayensi ekhethekile - Medical Endocrinology
Isifo senhliziyo kanye nomfutho wegazi ophezulu ku-mellitus yesifo sikashukela Ukuvama kwezifo zenhliziyo ezigulini ezinesifo sikashukela i-mellitus (9.5-55%) kudlula kakhulu lokho kubantu abaningi (1.6- d%). ...
Kusho ukuthini ukuthi isifo sikashukela esihambisana nokuphefumula kabi?
Ukuphefumula kabi kwisifo sikashukela: izimbangela nokwelashwa kwesifo sikashukela Ukubonakala komoya omubi akuyona nje inkinga yobuhle, kungavela ngenxa yokungasebenzi kahle emzimbeni, okumele kubhekwane nakho kuqala. ...
Ukulimala kwezinso kushukela: ukwelashwa kwe-proteinuria
I-nephropathy yesifo sikashukela: ukuhlukaniswa kwesigaba, izimpawu, ukuxilongwa, ukwelashwa, ukuvimbela phakathi kwazo zonke izingqinamba zesifo sikashukela esisongela umuntu, isifo sikashukela sithatha indawo eholayo. ...